Mouse COD tsara indrindra ho an'ny ady maoderina (2020) - Lalao
Ady maoderina no be mpitia indrindra eo amin'ny tontolon'ny fiantsoana adidy. Nanampy gameplay tsy manam-paharoa sy mampiala voly amin'ny Cod izy. Izy io dia miaraka amin'ny rafitra goavambe izay misy ny famonoana, ny mpanao basim-borona, ny rafitra famoronana kilasy, ary zavatra maro hafa izay fehezinao mandritra ny lalao. Mba hahatratrarana haavo tsara amin'ny ady maoderina Cod dia tsy maintsy manana totozy tsara indrindra ianao. Satria mety ho manam-pahaizana amin'ny torohevitra sy ny fahaiza-manao rehetra amin'ny fandresena ny lalao ianao, saingy mety tara ianao noho ny valin'ny totozy tsy ampy. Amin'ity lahatsoratra ity dia hanampy anao amin'ny antso an-tsarimihetsika tsara indrindra izahay ho an'ny ady maoderina mba hahafahanao mandrindra ny fahaizanao rehetra.
Ny totozy maoderina dia natomboka tamin'ny bokotra fipihana fanampiny hanaraha-maso ny gameplays maoderina anao, ary manampy anao hampiasa fomba mahomby amin'ny valinteny haingana. Manome hetsika haingana ny mpilalao ka mahatonga azy ho mpilalao pro-type be dia be ary manome vintana bebe kokoa handresy. Noho izany, ho an'ny filalaovana mety sy mahomby dia tsy maintsy mandeha amin'ny totozy maoderina sy be fisongadinana ianao mba hanampiana traikefa feno amin'ny lalao efa manaitaitra sy mampiala voly.
Ahoana ny fomba ahazoana finday PUBG ho an'ny PC?
Mouse tsara indrindra ho an'ny COD Mouse ho an'ny ady maoderina - Lisitra 5 ambony
Izahay dia hanome anao antsipiriany haingana momba ny sasany amin'ireo totozy maoderina tsara kalitao tsara indrindra hanampiana anao amin'ny fanaovana ezaka amin'ny fiantsenana ho an'ny Call of Duty Modern Warfare.
Izy io dia heverina ho totozy tsara indrindra amin'ny filalaovana Cod Modern warfare. Izahay dia mitanisa eto ny sasany amin'ireo fiasa manasongadina azy izay haharesy lahatra anao amin'ny fividiananao azy.
Bokotra E11 azo alamina.
Vanja 3,6 grama.
Loko azo ovaina mifanaraka amin'ny lokon'ny fitendry na PC anao.
Kodiarana mihodinkodina nohatsaraina.
Manome ny mpampiasa fikajiana aina sy malefaka.
Ny endriny dia mitambatra mba hahatonga azy io ho safidy faran'izay tsara ho an'ny mpilalao Cod maro amin'ny ady maoderina.
2. LOGITECH G903 hazavana
Iray amin'ireo totozy be mpividy indrindra amboarin'ity marika ity izy io. Ireto manaraka ireto dia singa manosika manan-danja izay afaka manentana anao handeha amin'izany.
Fiampangana tsy misy tariby.
Rafitra famahana herinaratra.
Ity totozy ity no karazana totozy tsara kalitao tsara indrindra mety ho hitanao amin'ny totozy tsy misy tariby. Ny zavatra tsara indrindra momba ity totozy ity dia ny tsy hanananao ahiahy momba ny famoahana azy satria mahavita mandoa vola na dia ampiasaina aza.
Iray amin'ireo totozy kilalao lafo indrindra io. Ireto manaraka ireto dia singa misongadina hisarika ny sainao.
Mandroboka izy io.
Izy io dia manana varatra RGB chroma azo ovaina.
Izy io dia manana bokotra valo azo alamina izay mamela ny mpilalao hamaly haingana.
Izy io dia manana sensor optika 20K DPI.
Manana fifehezana tanteraka izy io.
Manana tariby mihodina haingana izy.
Mety ho safidy tsara indrindra ho anao izany raha te hanana totozy maivana miaraka amin'ny endri-javatra faran'izay tsara indrindra ianao mba hampientanentana sy malefaka ny fiainanao.
Izy io dia iray amin'ireo totozy marika be mpividy indrindra amin'ny filalaovana ady maoderina CoD. Ireo endri-javatra lehibe dia hanamarina ny naotiny voalohany.
Izy io dia manana sensor optika 5G.
Tena azo namboarina io.
Izy io dia manana bokotra fanaingoana roa ambin'ny folo.
Kitapo miova feno sivy ambin'ny folo feno programmable.
Mety ho tsikaritrao ny mampiavaka ny bokotra izay mahasoa anao amin'ny valin'ny lalao tsara indrindra. Tsy maintsy mandeha amin'ity vokatra ity ianao raha te ho mpilalao pro amin'ny antso adidy maoderina.
Anisan'ny totozy Call of Duty malaza hafa ity SteelSeries Rival 710 Gaming Mouse ity koa dia nanao ny toerany manokana ary azo ampiasaina amin'ny tanjona lalao marobe ao anatin'izany ny Call of Duty Modern Warfare. Ireto ambany ireto ny endri-javatra mahavariana indrindra amin'ity totozy ity;
Izy io dia manana endrika fanairana fampandrenesana mandroboka
Manana ID modular izy io
Fa maninona no milalao totozy filokana?
Na dia nanomboka niantehitra betsaka tamin'ny mpanara-maso lalao aza ny tontolon'ny lalao dia tsy maintsy fantatrao fa ny mpandrindra lalao dia tsy afaka mandresy ny fahombiazany sy ny valiny haingana ataon'ny totozy. Tsy mora ny mizatra amin'ny totozy amin'ny voalohany, fa raha vao zatra totozy dia afaka mifehy tena mahomby amin'ny lalao.
Tsy maintsy mampiasa vola amin'ny totozy tsara kalitao ianao amin'ny filalaovana ny adidy satria hamokatra ny zava-bitanao io tsy misy isalasalana. Ny totozy tsara sy maoderina dia manome antoka anao ho mamokatra amin'ny lalao gameplay.
Raha te hanana ny traikefa tsara indrindra sy mahomby amin'ny Call of Duty Modern Warfare ianao dia tsy maintsy mieritreritra ny mampiasa vola be amin'ny totozy maoderina ianao hanampy anao amin'ny fikirakirana ny fahaiza-manao rehetra amin'ny lalao.
Ny lahatsoratra etsy ambony koa dia nanonona ny roa amin'ireo vokatra totozy tsara indrindra hanampy anao amin'ny fiantsenana tsy misy ezaka ary amin'ny fahombiazan'ny ady Cod Modern.
Tafik'ireo mpangalatra: fitambarana karazana 3 mahery
Fantatrao ve ny fomba fiafaran'ny Control Z Season 2?
sarimihetsika maimaim-poana izay amin'ny sinema an-tserasera tsy misintona
mila manana wifi ve ianao vao afaka mampiasa chromecast
tranonkala hijerena sarimihetsika maimaim-poana sy fandaharana amin'ny fahitalavitra tsy misintona
bluestacks marobe amin'ny pc 1
tranokala tsara indrindra handefasana seho